ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: တို့တွေ မတွေ့ဖြစ်ကြတဲ့အကြောင်း
မဆုံဖြစ်ကြတဲ့ အကြောင်လေးတွေ ဖတ်ရတာ လွမ်းတသသ ဖြစ်စရာ ...
OMG, extra like. :D ဟိ ဖဘမှာလို ပြောမိပြန်ပြီ။
တကယ်ဟ.. ဖတ်ရင်းမောတောင်လာတယ်။ မရပ်တမ်း ကိုယ်ပါလိုက်ပြောနေမိသလိုကြီးလေ။
" သုဝဏ္ဏဖက်ရောက်ရင် သူ့ကိုတွေ့ချင်သေးတယ်လို့ အမှတ်ရတယ်။ " မှာ.. " အမှတ်ရတယ် "ဆိုတာ နင်တို့ဒေသသုံးစကားမလား. ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ :)
မဲဆောက်ကလေ သိတယ်မဟုတ်လား ဟို ခပ်ပိန်ပိန် မော်ဒယ်လို ဘော်ဒီမျိုးနဲ့ကိုမောင်မျိုး ဆိုတာလေ သိတယ်မဟုတ်လား။ အေးလေ ... သူပေါ့ဟာ ကလေး ၈ မွှာပူးမွေးသတဲ့ အဲလေ သူ့ မိန်းမမွေးတာ ပြောတာ။ အဲ့ဒါ ခု ကလေးရှစ်မွှာပူးနဲ့ဘတ်လပိုင်ကိုလိုက်နေတာပဲတဲ့။ ခုတော့ မော်ဒယ်လို ကျော့ကျော့လေး မနေနိုင်ရှာဘူးပေါ့။ ကလေးအနှီးလျော်လိုက်၊ အီအီး ကျုံးလိုက်နဲ့ လေ။ အေးဟာ ... သူလည်း ကံကောင်းပါတယ် တစ်ခါထဲ ၈ ယောက်ဆိုတော့ .... အဟိ။
မောင်မျိုးရေ။ နားထောင်ရတဲ့ တစ်ဖက်ကလူက
အားတောင်နာလာတယ် ကိုယ်ကမပြောတတ်လို့း))
ကိုလတ်ရဲ့ကွန်မန့်နဲ့ မောင်မျိုးပို့စ် လိုက်မှလိုက် :P
ဒီပိုစ့်လေးကို ဒီကဗျာလေးနဲ့ ကွန်မင့်ပေးမယ် ။
ဝေးတယ်လို့ မမြင်ဘဲ ငါတို့ ဝေးကြ ။
ဝေးတယ်လို့ မထင်ဘဲ ငါတို့ဝေးကြ ။
ဒါပေမယ့် ငါတို့ ဝေးကြ ။
စိတ်ချင်းဝေးသွားတဲ့အခါ တကယ်ဝေးတယ် ။
အဟီး.. ဖတ်လို့ကောင်းတယ်... တကယ့်အဖြစ်လား.. ကိုမောင်မျိုးစကားပြောရင် အဲလိုပြောတာလားဟင်... :D... လွမ်းစရာလည်းကောင်း.. ပျော်စရာလည်းကောင်းတယ်.. ရေးထားတာလေး..